China YF-2016 Emeputa na Supplier | Yifan
Tebụl kọfị na-ebuli elu na-enye anyị ihe dị oke ọnụ ahịa ma na-elegharakarị anya: obere nchekwa nchekwa ọzọ na-emekarị ihe dị iche. Ọ bụ otu n'ime ihe kpatara tebụl kọfị nwere shelf na cubbi dị n'ime ya na-ewu ewu ma nwee ekele. Designsfọdụ atụmatụ na-ewere echiche a na ọkwa ọzọ na atụmatụ ndị dị elu na-ebuli elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ. Ọ dị ka ịnwe obere desktọọpụ maka obere laptọọpụ gị zoro ezo.
Nke a dị ka okpokoro kọfị mgbe niile ... ruo mgbe ị chọpụtara na ị nwere ike ibuli elu ma jiri ya dị ka tebụl iri nri. Tebụl ahụ nwekwara shelf mepere emepe na ebe nchekwa maka igosipụta ihe ịchọ mma na n'okpuru ya nwere mpaghara nchekwa nzuzo ọzọ.
Ọ na atụmatụ a minimalist imewe na ọcha edoghi na igwe anaghị ata nchara. E nwere ike bulie elu iji kpughee oghere nzuzo na-esote obere drawer. Jiri ya dị ka obere ọrụ ma ọ bụ ebe dị mma maka akwụkwọ gị ma ọ bụ nri.
Soro onye kerịta ahụmịhe kọfị dị elu nke dị n'elu ma ọ bụ jiri akụkụ abụọ n'onwe gị, maka ebumnuche dị iche. Mgbe ịchọghị tebụl, jiri nke a dịka okpokoro kọfị. Ọ na-adị mma n’anya na ọgbara ọhụụ ma ọbụnadị na - enye gị ebe ị na - echekwa ihe ole na ole n’ihụ.
A na-agbakwunye usoro mbuli elu na-enweghị ntụpọ na tebụl kọfị ọgbara ọhụrụ a ma nye ya ohere ịcha mma ma maa mma n'oge niile. N'otu oge ahụ ọ na-ekpughe ngalaba nchekwa bara uru maka akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ kachasị amasị, remotes ma ọ bụ laptọọpụ.
O siri ike iche n'echiche na okpokoro kọfị dị gịrịgịrị nwere ihe ọ bụla ị zoo. Mbuli-elu n'agbanyeghị na-ekwu ma ọ bụghị. Ọ bụ naanị na oyi akwa dị elu na-ebuli elu, na-ekpughe obere oghere na-emighị emi nke zuru ezu maka laptọọpụ. Nwere ike igbachi elu na ebe na atọ dị iche iche elu, dabere na ihe ị na-eji ya maka na gị onwe gị mmasị.
Nke gara aga: YF2011
Osote: YF-H-801 Okomoko Kitchen Nchekwa Sideboard kabinet na Gold
Tebụl kọfị Ebe Ime Mgba ọgbara ọhụụ
Tebụl Okpokoro Marble
Tebụl Kọfị nke oge a
Tebụl kọfị kọfị ọlaọcha